China polyester & naịlọn Nucleator P-24 Manufacturer na Supplier | BGT
Polyester & Naịlọn Nucleator P-24
P-24 bụ anụ ahụ ogige nke ole na ole Nucleating Nnọchi nke ogologo yinye polyester sodium nnu iji mee ọsọ crystallization nke Polyester na naịlọn.
Enwere ike iji ya maka PET, PBT na Naịlọn.
P-24 bụ ngwakọta anụ ahụ nke mmadụ ole na ole na-arụ ọrụ nke ogologo polyester sodium nnu iji mee ka mkpuchi nke Polyester na Nylon dị ngwa.
1. Shortening ịkpụzi okirikiri na-amụba arụpụtaghị ihe.
2. Melite demoulding.
3. Improkwalite nkwụsi ike akụkụ nke ngwaahịa.
4. Belata mbelata ngwaahịa.
5. Mgbochi nrụgide nrụgide nke ngwaahịa.
6. Meziwanye Njirimara akụrụngwa (mee ka ike na ike sie ike).
7. Imezi elu gloss.
PITA, PBT, naịlọn
0,2% -1% (ọ na-abụkarị ihe dị ka 0,5%)
20 n'arọ / akpa
Nke gara aga: Ngwa anya Brightener OB-1
Osote: PITA-98C onye na-ekpo ọkụ
Ngwunye Ngwunye Maka PET
PITA gị na-ahụ maka ihe dị mkpa
PITA na-ekpokọta P-24